Ukuhwebelana okuphezulu kwama-cryptocurrensets | Ukuhwebelana okuhle | Ezezimali Zomnotho
UMiguel Gaton | | Izaziso
Nsuku zonke abantu abaningi banesithakazelo thola ama-cryptocurrensets ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. I-Bitcoin iyimpahla eyedlule ngoDisemba 2017 eyayinenani lama- $ 16.000 kanye nengxenye enkulu yabatshalizimali abanjengombono wokuba yingxenye yalolu shintsho kwezobuchwepheshe nokusebenzisa ngokunenzuzo namathuba anikezwa ama-cryptocurrensets namuhla.
Ukuhweba ngezimali zedijithali Kuvuse intshisekelo enkulu eminyakeni yamuva phakathi kwezakhamizi zaseSpain. Ezinyangeni zokugcina a izinhlobo eziningi zezimali ezintsha zedijithali okwenza le makethe ikhule ibe nkulu futhi ibe yinkimbinkimbi, abasebenzisi abaningi abafuna ukufaka imali kuma-cryptocurrensets ngeke bazi ukuthi bangaqala kanjani futhi bathenge ama-Bitcoins abo okuqala noma ama-Ethers, ukuphawula ngama-cryptocurrensets amabili aziwa kakhulu ...
Yize kunezindlela eziningi zokuthenga ama-cryptocurrensets, indlela enconyelwe kakhulu yokwenza ukuthenga nokuthengisa ama-bitcoins noma amanye ama-cryptos asetshenziswa amapulatifomu wokushintshanisa (aziwa njenge ukushintshanisa ngegama layo lesiNgisi) lapho abatshalizimali abangathenga khona amathokheni abo okuqala futhi baphathe amaphothifoliyo abo e-cryptocurrency. Lezi zinkundla zikhona ngokufana nabathengisi bamasheya kuphela ukuthi esikhundleni sokuthenga nokuthengisa amasheya lokho esikuthengayo nesikuthengisayo kungama-cryptocurrensets.
1 Izinhlobo ezahlukene zokuhwebelana
2 ICoinbase / GDAX
9 Yini ongayincoma?
Izinhlobo ezahlukene zokuhwebelana
Imakethe ingahlukaniswa ngamaqembu amabili ahlukene okuhwebelana.
Izinhlelo ezihlanganisiwe: Abasebenzisi bangathenga futhi bathengise ama-cryptocurrensets abo ngokusebenzisa ipulatifomu eyodwa esebenza njengomxhumanisi phakathi komthengi nomthengisi ngokushintshanisa ikhomishini encane. Lolu hlobo lokushintshana lufana kakhulu nabathengisi bamasheya bamanje futhi yibo abaphatha ivolumu enkulu yebhizinisi namuhla. Ezinye izibonelo yiKraken, Binance, Kucoin, njll.
Izinhlelo ezihlukanisiwe: Ngenxa yobuchwepheshe beBlockchain, kuvela isizukulwane esisha sokuhwebelana ngezindawo lapho ukuthenga nokuthengiswa kwamathokheni kwenziwa ngqo phakathi kwabantu, ipulatifomu iyindlela elula yokuxhumana. Kulokhu ngokuvamile akukho khomishini (noma iphansi kakhulu) futhi okwamanje amasistimu angasetshenziswa kangako ngoba ukubukeka kwawo kusha sha. Kulokhu, i-IDEX kufanele ivezwe njengokushintshisana okusetshenziswa kakhulu emhlabeni.
Umehluko obalulekile phakathi kwalezi zinhlelo ezimbili ukuthi amasistimu aphakathi nendawo anohlobo oluthile kuphela lwemali etholakalayo (leyo eye yamukelwa yipulatifomu) ngenkathi ezinhlelweni ezisabalalisiwe le ndlela yokulawula ingekho futhi wonke amathokheni emakethe angathengwa inqobo nje uma kukhona umsebenzisi ozimisele ukuthengisa nomunye ukuthenga.
Ukuqhubeka ngiyakukhombisa uhlu olunezinsizakalo ezithile zokushintshana ezisebenza eSpain. Uhlu lwakhiwe kuphela ngamasistimu ahlanganisiwe, ngoba lawo asezingeni eliphansi anconywa kuphela kulabo basebenzisi abanolwazi oluningi lokutshala imali kuma-cryptocurrensets.
ICoinbase / GDAX
ICoinbase ne-GDAX yayo esemthethweni iyindlela yokungena eyinhloko emhlabeni we-crypto wabasebenzisi abaningi, kusukela Bavumela ukusebenza ngama-Euro namaDola. Masikusho lokho ngokujwayelekile, uma ufuna ukusebenzisa i- imali yomhlaba yangempela kuma-cryptocurrensets, ukusebenzisa iCoinbase imvamisa kuyindlela engcono kakhulu.
Kuyisiteji uvikeleke kakhulu, evumela ukuthi imali ye-FIAT ifakwe ngokudluliswa kwebhange noma ikhadi lesikweletu. Amakhomishini ayo ajwayele ukuba phezulu, kepha njengoba ngisho yipulatifomu ephephe kakhulu futhi ekhokhwayo. Ikuvumela kuphela ukuthi uthenge i-Bitcoin, i-Bitcoin Cash, i-Ethereum ne-Litecoin ngakho-ke uma sifuna ukuthenga amanye ama-cryptocurrensets kuzofanele sisebenzise okunye ukushintshana.
Ngaphezu kwalokho, manje kungenzeka ukudala i-akhawunti ku-Coinbase naku thola u- $ 10 mahhala uma ufaka i- $ 100 yokuqala. Okwakho kufanele ubhalise usebenzisa lesi sixhumanisi bese uthumela i- $ 100 ku-akhawunti yakho.
Okwamanje ukushintshaniswa ngesabelo esikhulu semakethe kanye nevolumu ephezulu kakhulu yokuhweba yakho konke okukhona. Ayinayo ikhathalogu ebanzi kakhulu yama-cryptocurrensets, kepha ngaphandle kokungabaza kuyindlela engcono kakhulu yokuthengisa konke lokho etholakalayo ngoba kulapho uzothola khona intengo engcono kakhulu.
I-registry ivame ukuvula kuphela ngezikhathi ezithile ukugwema ukuthola i-avalanche yabasebenzisi abasha. Uma ufuna ukubhalisa ku-Binance ungakwenza ngokuchofoza lesi sixhumanisi.
Lokhu kushintshaniswa futhi kukuvumela ukuthi usebenze ngama-Euro namaDola ngakho-ke futhi kusetshenziswa kabanzi ukuqala ukusebenza ngama-cryptocurrensets. Yiba ne- ikhathalogi ebanzi yemali kuneCoinbase, ngoba ivumela ezinye ezinjengeRipple, iDash, i-Iconomi, njll futhi amakhomishini ayo aphansi ngandlela thile.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ipulatifomu ibingazinzile futhi isebenza ngayo kwakungukuhlupheka, kepha kusukela ngoJanuwari 2018 benze ukuvuselelwa kokuqina futhi ipulatifomu isebenza kahle kakhulu ngakho-ke kunconyiwe ngokuphelele. Ukubhalisa eKraken ungakwenza ngokuchofoza lapha.
Kucion kuyinto exchange esetshenziselwa kabanzi ukuhweba ama-cryptocurrensets amasha futhi ezingakatholakali kokunye ukuhwebelana okukhulu njengeKraken noma iBinance. Inevolumu yokuhweba ephansi ngaphezudlwana kunayo yonke eyedlule, kepha kuyindlela engcono kakhulu lapho ufuna ukuthenga futhi uthengise amanye ama-cryptos angaziwa njengeMatrix, WanChain noma i-WPR ukunikeza izibonelo ezimbalwa.
Inqubo yayo yokuqinisekisa ilula kakhulu, ngakho-ke uma ufuna ukubhalisa ku-Kucoin kufanele uchofoze lapha bese ulandela zonke izinyathelo.
IHitBTC ingukushintshana ngomakadebona futhi isebenza kahle kakhulu. Ipulatifomu yayo kulula ukuyisebenzisa futhi ivumela ukufinyelela kwamathokheni angavamisile ukutholakala kwamanye amapulatifomu emakethe, ngakho-ke abasebenzisi bochwepheshe be-cryptocurrency bavame ukuba ne-akhawunti kuyo. Ukubhalisa kufanele uchofoze lapha.
Kuyisiteji esetshenziswa kabanzi emakethe yaseMelika ukuthenga nokuthengisa amaBitcoins. Ithuluzi linamandla kakhulu, lisebenza ngamathokheni ambalwa kepha linevolumu yokuhweba eyamukelekayo.
IPoloniex ingukushintshisana ebidume kakhulu ngo-2016 nango-2017 kepha ibilahlekelwa ukubaluleka kamuva nje. Ube nezinkinga ezithile zokuphepha Ngakho-ke asincomi ukuthi uyisebenzise ngaphandle kokuthi ufuna ukutshala imali kwi-cryptocurrency etholakala kuphela kule nkundla.
Ngokuvamile akukho ukushintshana okungcono kunakho konke okunye ngazo zonke izindlela ngakho kunzima kakhulu ukuncoma eyodwa kuphela. Ipulatifomu ngayinye inamaphuzu ayo amahle futhi amabi futhi kuncike kakhulu kunhlobo lwemali esifuna ukutshala kuyo, ngoba ukushintshaniswa ngakunye kuvumela ukufinyelela kukhathalogi ethile yamathokheni. Ngokuvamile, uma okudingayo ukuqala ukuthenga ama-cryptocurrensets akho wokuqala ngama-euro noma ngama-dollar, Isincomo sethu ukuthi usebenzise iCoinbase, ngoba ukusetshenziswa kwayo kufana kakhulu nomthengisi wendabuko futhi lokho kuzokusiza ukwenza imisebenzi yakho yokuqala ngokuzethemba.
Uma kamuva ufuna ukuhweba noma uma unentshisekelo yokutshala imali kwamanye ama-cryptocurrensets ngaphandle kwama-5 atholakala eCoinbase, isincomo sethu ukusebenzisa iBinance ngokuba nguye onevolumu ephezulu kakhulu nokuvikeleka okuphezulu.
Kepha njengomthetho ojwayelekile, abantu abebelokhu bebeka imali kuma-cryptocurrensets iminyaka eminingana ngokuvamile babe nama-akhawunti ngokushintshana okuningi Njengoba kunezinhlamvu zemali ezitholakala kuphela ngokushintshana okuncane kakhulu nokwevolumu ephansi, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi i-akhawunti ilungele uma ufuna ukuyisebenzisa, ukuze ukwazi ukukwenza ngokushesha okukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izaziso » Ukuhwebelana ngama-cryptocurrensets
Ungasiqinisa kanjani isiteleka?
Ukuvalelisa kwesivumelwano senuzi ne-Iran kuzothinta kanjani imakethe yamasheya?